Kukuya mavhiri Uye Kucheka Disc Fekitori, vatengi - China Kukuya mavhiri Uye Kucheka Disc Vagadziri
TAA diamond kukuya vhiriinoshandiswa kucheka nekukuya kweye ductile kukanda simbi, Grey Kukanda simbi, kukanda simbi, simbi extrudate, yakasimbiswa kongiri, fiber girazi uye zvinhu zvinopesana. Iyo huru inoshanda indasitiri ndeyekuwanikwa, michina, kuvaka chikepe uye kugadzirisa, kuvaka, kusanganisa kugadziriswa, kubvarura mota, kununura nechimbichimbi, zvichingodaro.
TAA daimondi yekucheka disc inoshandiswa kucheka nekukuya kweye ductile kukanda simbi, Grey Kukanda simbi, kukanda simbi, simbi extrudate, yakasimbiswa kongiri, fiber girazi uye zvinhu zvinopesana. Iyo huru inoshanda indasitiri ndeyekuwanikwa, michina, kuvaka chikepe uye kugadzirisa, kuvaka, kusanganisa kugadziriswa, kubvarura mota, kununura nechimbichimbi, zvichingodaro.
TAA daimondi yekucheka discinoshandiswa kucheka nekukuya kweye ductile kukanda simbi, Grey Kukanda simbi, kukanda simbi, simbi extrudate, yakasimbiswa kongiri, fiber girazi uye zvinhu zvinopesana. Iyo huru inoshanda indasitiri ndeyekuwanikwa, michina, kuvaka chikepe uye kugadzirisa, kuvaka, kusanganisa kugadziriswa, kubvarura mota, kununura nechimbichimbi, zvichingodaro.